इजरायलको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीको हडतालका कारण १ हजार नेपालीले इजरायल जान पाएनन – Eps Sathi
February 25, 2022 945
सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी रोजगारीका लागि इजरायल जान ठिक्क परेका करिब १ हजार नेपाली त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण जान पाएका छैनन। इजरायलमा त्यहाँ रहेका बूढा पाकाहरुको हेरचाहका लागि केयर गिभर कामका लागि नेपाली कामदार इजरायल जाने गरेका छन।
इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अहिले आफूहरुको श्रम र सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आन्दोलनमा रहेका छन। उनिहरुले गत नोभेम्बर महिनाबाट नै आफूहरुको सेवा सुविधा बृध्दिका लागि भन्दै भद्र हडताल सुरु गरेका थिए। आफ्नो कामको अवस्था सुधारको माग राखेर उनिहरले गत १ बर्षदेखि यस्तै किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका थिए। तर केहि समय अघि देखि यस मन्त्रालयमा गरिने खास खास कामहरु आफूहरु नगर्ने भन्दै हडताल गरिरहेका छन।
इजरायलले सन २०२० मा नेपाल र जर्जियासँग कामदार भित्राउनका लागि दुइ पक्षिय सम्झौता गरेको थियो। पहिलो पटक यि दुई देशका कामदारहरुलाई इजरायलले आफ्नो बृध्द घरहरुमा केयर गिभरका रुपमा काम गर्न दिने अनुमति दिएको थियो। बूढापाकाहरुको उपचार हुने अस्पताल, नर्सिङ होम तथा मेन्टल हेल्थ सेन्टरहरुमा नेपाली कामदारहरुलाई इजारायलले लान थालेको छ।
विगतमा भने ब्यक्तिगत घरहरुमा मात्रै केयर गिभरका रुपमा काम गर्न दिइएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विशेष अनुरोधमा कोरोनाको महामारीलाई समेत वेवास्ता गर्दै इजरायलले कामदार भित्राउन दिएको अनुमति इजरायलकै विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको हडतालका कारण अवरुध्द हुन पुगेको छ।
“हामीले नेपालबाट अहिले १ हजार कामदार इजरायल आएको देख्नुपर्ने अवस्थामा विना ठोस कारण उनिहरु आउन पाइनरहेको स्थिती देखिरहेका छौं। उनिहरु इजरायलका सिनियर सिटिजन सेन्टरहरुमा अति आवश्यक थियो।” इजरायलको नन प्रोफिट एसोसियशन अफ एज्ड केयर होमका डिरेक्टर नाहि काट्जले बताए। केही समय पश्चात अरु १ हजार ५ सय कामदार इजरायलले भित्राउने योजना समेत बनाइरहेको उनले बताए।
Posted in इजरायल खबर
Prevभक्तपुरको राधेराधे चोकको १७ तल्ले भवन कसको हो? किन अहिले सम्म अलपत्र छ?
Nextबैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पिसीआर परिक्षण निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय
सामान्य मासु पसलेका छोरा बने कोरियाकै सबैभन्दा धनी ब्यक्ति, जानौं को हुन उनि? के ब्यवसाय गर्छन?
कोरियन लाहुरेलाई प्रेमिकाको अन्तिम पत्र, पत्र पढ्दा जो कोहि हुनेछ भावुक